> Resource> iCloud> ụzọ dị mfe iji Jikwaa iCloud Ndi ana-akpo
Uploaded gị niile iPhone kọntaktị na iCloud? Ọfọn, nwere ike ị chọrọ jikwaa ha, gụnyere ndabere, merging na nhichapụ. Iji jikwaa iCloud kọntaktị, ebe a, ga-amasị m ike ikwu na ị na-iCloud kọntaktị manager - Wondershare TunesGo.
Nke a njikwa na-enye gị ike ndabere niile ma ọ bụ họrọ kọntaktsị na iCloud ka CSV faịlụ, ma ọ bụ otu ma ọ bụ multiple vCard faịlụ (s), ma ọ bụ Outlook, Windows Akwụkwọ Adreèsị na Windows Live Mail. Ke adianade do, ị nwere ike idezi iCloud kọntaktị Ama, jikota oyiri iCloud kọntaktị ma ọ bụ hichapụ na-abaghị uru iCloud kọntaktị na-egosi na gị na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka.
Download software na-agbalị ijikwa kọntaktsị na iCloud.
Cheta na: TunesGo-enyere gị aka dezie, wepu ma ọ bụ jikota iCloud kọntaktị gosiri na gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad. Ma iCloud kọntaktsị na netwọk nkesa gaghị emelitere kakwa.
Olee otú jikwaa iCloud kọntaktị
N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ agwa gị otú ị ndabere iCloud kọntaktị na CSV ma ọ bụ vCard faịlụ (s), ihichapụ ma ọ bụ jikota iCloud kọntaktị mbipụta.
Cheta na: Wondershare TunesGo n'ụzọ zuru ezu na-akwado iPhone 4S, iPhone 5c, iPhone 5s, iPad Obere, iPod aka 5 na na. Get ọzọ Ama banyere akwado Apple ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone / iPod aka / iPad na kọmputa
Nke mbụ niile, na-na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka jikọọ site ịkwụnye a eriri USB kọmputa. TunesGo ga-ntabi ịchọpụta iDevice na mgbe ahụ na-egosi ya na isi window.
Nzọụkwụ 2. Jikwaa kọntaktsị na iCloud
Ugbu a, m ga-agwa gị otú ị jikwaa kọntaktsị na iCloud na nkọwa. Akpa, jide n'aka na ị banyere n'ime gị iCloud akaụntụ na gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad. Mgbe ahụ, na-aga "Ndi ana-akpo". N'okpuru "Ndi ana-akpo" Atiya, ị ga-ahụ iCould kọntaktị ìgwè. Pịa ka ìgwè egosi niile iCloud kọntaktsị na nri ebi ndụ.
Ndabere kọntaktsị na iCloud ka otutu / a otu vCard faịlụ ma ọ bụ CSV faịlụ.
Họrọ gị chọrọ kọntaktị ma ọ bụ họrọ kọntaktị niile. Pịa "Import / Export"> "Export kọntaktị ahọrọ" ma ọ bụ "mbupụ niile Ndi ana-akpo"> "ka A Single vCard File," na-Multiple vCard Files ", ma ọ bụ" CSV File ". Chọgharịa kọmputa gị ga-a nchekwa ịzọpụta exported vCard faịlụ (s) ma ọ bụ CSV faịlụ.
Export iCloud kọntaktị na Outlook, Windows Live Mail na Ohere adreesị Book.
N'otu aka ahụ, pịa "Import / Export". Na esiri-ala ndepụta, họrọ "mbupụ niile Ndi ana-akpo" ma ọ bụ "Export kọntaktị ahọrọ". Mgbe a ọhụrụ esiri-ala ndepụta na-egosi, ị nwere ike họrọ Export iCloud kọntaktị na Outlook 2003/2007/2010/2013, Outlook Express, Windows Live Mail na Windos Address Book.
Dezie iCloud kọntaktị.
Họrọ otu kọntaktị. On nri n'igbe, pịa "Dezie". Na mmapụta Dezie kọntaktị window, ị nwere ike idozi kọntaktị site aha ikpeazụ ma ọ bụ aha mbụ, pịnye nọmba ekwentị, adreesị ozi-e, adreesị ụlọ, kọntaktị ìgwè, ụlọ ọrụ aha na ndị ọzọ Ama.
Jikota oyiri iCloud kọntaktị.
Pịa "De-oyiri". TunesGo ga chọpụta na-egosi niile kọntaktị depụtaghachiri na mmapụta window. Mgbe ahụ, họrọ a egwuregwu ụdị na oyiri kọntaktị ị na-aga ka jikota. Pịa "jikota Họrọ".
Gbalịa TunesGo na-agbalị ijikwa iCloud kọntaktị.
Olee otú ndabere iPhone Music